हलिउडमा यौन दुराचारको कम्प – NamoBuddha Khabar
हलिउडमा यौन दुराचारको कम्प
सोमबार, कार्तिक ०६, २०७४ | १६:०८:३८ |
विश्वभरका थुप्रै महिला ट्विटर प्रयोगकर्ताहरु शुक्रबार ट्विटर बहिष्कार अभियानमा सहभागी भए। हलिउड निर्माता हार्भी वाइन्स्टिनविरुद्ध बलात्कारको आरोप लगाएकी अभिनेत्री रोज म्याक्गोअनको एकाउन्ट ट्विटरले निलम्बन बनेपछि यो अभियान सुरु भएको हो। ह्यासट्याग वुमेन बोयकट ट्विटर अहिले ट्रेन्डिङ छ।
ट्विटरले निजी फोन नम्बर सार्वजनिक गरेको कारण म्याक्गोअनको अकाउन्ट निलम्बन गरेको जनाएको छ। यद्यपि यो सबै हलिउड प्रभावशाली निर्माता हार्भी वाइन्स्टिनविरुद्धका आरोपहरु सार्वजनिक भएपछि सुरु भएको हो। कहिले जातीय विभेद त कहिले असमान भुक्तानीका कारण बारम्बार विवादमा पर्ने हलिउडमा यसपटक यौन दुराचारको विषयले भूकम्प ल्याइदिएको छ।
कसरी भयो सुरुवात?
गत अक्टोबर ५ मा न्युयोर्क टाइम्सले म्याक्गोअन र एस्ले जुडसहितका अभिनेत्रीहरुले वाइन्स्टिनविरुद्ध यौन दुराचारको आरोप लगाएको विषयमा एक रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो। आफूविरुद्ध यस्तो आरोप लागेपछि वाइन्स्टिनले माफी मागेका थिए। तर झण्डै तीन दशकसम्म अनेकौँ महिलाहरुमाथि यौन दुराचार गरेको भन्ने आरोप उनले अस्वीकार गरेका थिए।
पत्नी जर्जियाना च्यापम्यानको साथमा वाइन्स्टिन
त्यसपछि हलिउडका विभिन्न सेलिब्रेटी वाइन्स्टिनको विरोधमा आएका थिए।
अक्टोबर ८ मा उनलाई कम्पनीले बर्खास्त गर्‍यो। अक्टोबर १० थप १३ महिलाले न्युयोर्कर म्यागेजिनमार्फत वाइन्स्टिनविरुद्ध बलात्कार र दुर्व्यवहारको आरोप लगाए।
हलिउडका चर्चित अभिनेत्रीहरु ग्वेन्थ पाल्ट्र र एन्जेलिना जोलीले पनि आफूहरुमाथि दुर्व्यवहार भएको बताए।
त्यसै दिन वाइन्स्टिनकी पत्नी जर्जियाना च्यापम्यानले पतिलाई छोडेको घोषणा गरिन्।
१२ अक्टोबरमा अमेरिका र बेलायतका प्रहरीले १९८० को दशक र २००४ का केही आरोपहरुमा अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ।
अक्टोबर १२ मै अभिनेत्री रोज म्याक्गोअनले ट्विटरमार्फत वाइन्स्टिनले आफूमाथि बलात्कार गरेको जनाइन्। उनी वाइन्स्टिनविरुद्ध बलात्कारको आरोप लगाउने चौथो महिला हुन्। उनीबाहेक लुसिया इभान्स, एसिया अर्जेन्टो र एक नाम नखुलेकी महिलाले पनि वाइन्स्टिनविरुद्ध बलात्कारको आरोप लगाएका छन्।
यसअघि पनि म्याक्गोअनले आफूलाई एक शक्तिशाली फिल्म निर्माताले बलात्कार गरेको कुरा सार्वजनिक रुपमा भन्ने गरेकी थिइन्। यद्यपि उनले वाइन्स्टिनको नाम लिएकी थिइनन्।
गत साता न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टमा १९९७ को एक घटनामा म्याक्गोअनलाई १ लाख डलर दिएर चुप लगाइएको जनाइएको छ। यद्यपि यो मामिलामा उनी चुप लागिनन्। बरु उनले अरु महिलालाई पनि सहेर नबस्न आग्रह गरेकी छन्।
वाइन्स्टिनले सहमतिबिना कसैसँग पनि यौन सम्बन्ध नबनाएको जिकिर गरेका छन्। यसबेला उनको नाम र करिअर दुवै ध्वस्त भइसकेको छ।
अभिनेत्रीहरुले वाइन्स्टिनले संवेदनशील अंगमा छुने, समात्ने, मसाज गर्न लगाउने, हस्तमैथुन गरेको हेर्न बाध्य पार्नेजस्तो आरोपहरु लगाएका छन्।
हलिउडमा वाइन्स्टिनको पतनसँगै सामुन्ने आएको सबैभन्दा जटिल प्रश्न हो, यत्तिका वर्षसम्म आफ्नो यस्तो व्यवहार उनी लुकाउन कसरी सफल भए?
हलिउडमा वाइन्स्टिनको व्यवहारलाई ‘ओपन सेक्रेट’ मान्नेहरु पनि धेरै छन्। कतिसम्म भने २०१३ को ओस्कार समारोहमा अभिनेता सेथ म्याफार्लेनले उत्कृष्ट सहअभिनेत्री मनोनित भएका पाँच अभनेत्रीलाई भनेका थिए, ‘बधाइ छ, अबदेखि तपाईंहरुले हार्वी वाइन्स्टिनसित आकर्षित भएको अभिनय गर्नुपर्ने छैन।’
उनको यो मजाक जति भद्दा थियो, यसबेला हलिउडको अनुहार त्योभन्दा बढी भद्दा देखिएको छ। फिल्म उद्योग तथा मिडियाका शक्तिशाली हस्तीहरुले यो तथ्यलाई जानाजान लुकाएको आरोपहरु पनि लाग्न थालेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा वाइन्स्टिनको आलोचनामा उत्रिने कलाकारलाई पनि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको छ। चर्चित अभिनेता तथा निर्देशक बेन एफ्लेकले वाइन्स्टिनको आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि उनीविरुद्ध पनि एक टेलिभिजन प्रस्तोता हिलारी बर्टनलाई दुर्व्यवहारको आरोप लाग्यो। त्यसपछि एफ्लेकले ११ अक्टोबरमा माफी मागेका छन्।- एजेन्सीहरुको सहयोगमा
तीन लाख पुरस्कार राशीको टिकटक प्रतियोगिता बराहक्षेत्रमा हुँदै !
आस्मानको ‘लेकमा जाँदा’ के भयो ?
“मायाको रङ्ग” मा नायक सागर र मोडल अनुस्काको केमेष्ट्री ! (भिडियोसहित)